ICaucasian Shepherd Dog: Yazi izici, imvelaphi nokunakekelwa | Izinja Zomhlaba
ICaucasian Shepherd Dog
ULurdes Sarmiento | | Izinja zizala
Zonke izinhlobo zezinja zinokuhluka kwazo. Izici ezingokomzimba nezingokwengqondo zihlobene nakho kokubili ukuvela kwezakhi zofuzo nomsebenzi ezisetshenziselwe wona. I- ICaucasian Shepherd Dog ingeyomdabu, njengoba igama layo lisho, evela esifundeni saseCaucasus.
Ngenxa yezimo zemvelo ithuthukise ijazi elikwazi ukulivikela emazingeni okushisa aphansi kanye nokulimala okuvame kakhulu ongakuthola ngokuhweba kwakho kokwelusa. Ukubukeka kwayo ngokomzimba kunamandla kakhulu futhi kuphakathi kwezinja ezinkulu kakhulu ezikhona.
Yize kunezinhlobonhlobo zezinhlobo zezinja zaseCaucasus ezinezici ezifanayo, okwamanje Uhlobo olulodwa kuphela olwaziwa ngegama loMalusi waseCaucasus.
I-Russian Kennel Club incamela ukusebenzisa ukuhumusha kwaseRussia kwe- imbuzi yezimvu u-Ovcharka, igama lapho lolu hlobo luye lwathandwa kakhulu esifundeni esentshonalanga. UMalusi waseCaucasus uyingxenye yabathathu abadumile babelusi baseRussia abaziwa ngokuthi yiSouth Russian Shepherd kanye neCentral Asia Shepherd.
Umsuka wale nja eyinqaba namanje awunasiqiniseko futhi kunamahemuhemu okuthi imvelaphi yalolu hlobo ibhekwa njengenja yaseTibetan Mastiff. Okungenakuphikwa ukuthi kusetshenziswe isikhathi eside njengo umhlambi wezinkomo kanye nenja yezimvu ngenxa yokubukeka kwayo okumangalisayo, amandla nokumelana namazinga okushisa aphansi.
Ukuvela kokuqala ngokusemthethweni kohlobo embonisweni wezinja zasentshonalanga kubuyela emuva ngawo-30 eJalimane. Iqiniso liwukuthi luhlobo lwasendulo olumangazayo yezici ezihlukile. Impela imvelaphi yayo ivela endaweni enezimo ezinzima zokuphila, isici esivumele ukuthuthukiswa kofuzo oluthile lohlobo.
Ukulunywa kwale nja kuphakathi kwezinto ezinamandla kakhulu emhlabeni we-canine. Leli thuluzi elikhulu liwusizo kakhulu ku- uhlamvu oluyisimangaliso lokuzivikela nobumnene bokuzimisela.
Akuyona neze isilwane sazo zonke izikhala nanoma yiluphi uhlobo lomnikazi. Abantu abathatha isinqumo sokuzalela lolu hlobo lwenja kumele bazi kahle kakhulu ngabo izici, ukunakekelwa kanye nezidingo. Uma uzifundisa kahle uzoba nenkampani ethembekile futhi evikelayo.
Ngokuphathelene nokubukeka komzimba kwezinja zaseCaucasian Shepherd uma zikhuliswe kahle zinempilo futhi zihlala isikhathi eside. Ngokuphathelene nebala labo lomzimba, banamathambo aqinile nemizimba yemisipha.
Impumulo nekhala kuhlangene, izindlebe zayo zingunxantathu futhi zilenga phansi ezinhlangothini futhi okwamanje akuvunyelwe ukusika izindlebe. Inhloko yalezi zilwane ezifuywayo inkulu.
Njengoba zibhekwa njengezinja ezinkulu, kufanele kucatshangwe ukuthi ubukhulu balezi zinja bukhulu impela. Mayelana nokuphakama, isilinganiso singamasentimitha angama-70. Kodwa-ke, kunomehluko phakathi kowesilisa nowesifazane.
Ukuphakama okuncane kwabesilisa kungamasentimitha angama-65 no-62 kowesifazane Ngokuqondene nokuphakama okuphezulu, awukho umkhawulo obekiwe. Eyesilisa inkulu futhi ingafinyelela kumasentimitha angama-75 kuthi abesifazane babe ngama-70.
Ngenxa yamandla abo amangalisayo nomzimba wabo, izinja zaseCaucasus zisindayo impela. Abesifazane abadluli neze amakhilogremu angamashumi ayisihlanu kepha abesilisa bangaba nesisindo esingamakhilogremu angama-70 futhi bangafinyelela kuma-90. Ngokuphathelene nesisindo, ukwehluka kobulili kohlobo kuyabonakala.
Ngokuphathelene nejazi kunezinhlobo ezintathu, izinwele ezinde, ezimfushane neziphakathi nendawo. Kuzo zontathu izinhlobo izinwele ziminyene futhi zibushelelezi. Banokukhethekile kokuthola ijazi langaphansi elinoboya obukhanyayo elibavikela ezimweni ezibandayo.
Uhlobo lunoboya obunemibala ehlukene kepha kuvunyelwe kuphela izindawo ezimpunga nezimhlophe ezinoboya obude emincintiswaneni. Kukhona nezinhlobo zombala omnyama namabala omlilo namathoni we-chestnut.
Ulwazi lwalesi sici ngabanikazi lubalulekile futhi ngenxa yomsebenzi le nja ewufezile amakhulu eminyaka ivikela futhi iqondisa imfuyo, inezimfanelo zokuzalwa zomholi. Ngaleso sizathu, umnikazi wayo kufanele azimise njengomholi wepakethe ukuba yi-alpha futhi ngalokho kufanele ube nolwazi.
Kumnikazi ongenalwazi, ukukhulisa isilwane kuzoba yinto enzima, ngoba umnikazi kufanele ahloniphe futhi athobele ngokukhombisa ukulawula isilwane. Uma lokhu kwenzeka ngempumelelo kuzokwakhiwa isibopho esingenakwephulwa phakathi komnikazi nesilwane esifuywayo.
Noma lokhu kwenzeka ngempumelelo, kufanele kwaziwe ukuthi i- ICaucasian Shepherd yisilwane esinemizwelo enamandla futhi uma yena noma umndeni wakhe uthathwa njengobungozi, uzosebenza njengoba ebona kunesidingo sokuvikela indawo yakhe.
Ngalesi sizathu, kubaluleke kakhulu ukuthi labo bantu abangahlobene nesilwane bagcine ibanga labo futhi bangakhohlwa ukuthi babhekene nokulunywa okunamandla. Ubudlelwano bezilwane ezifuywayo nezingane abunabungozi ngokucabangela imvelo yabo abamane nje bababheke njengabayingozi futhi kanjalo nabanikazi babo bengababheki.
Kubaluleke kakhulu ukuthi lezi zilwane zingakhuliswa ngodlame, awudingi ukukhuthaza umlingiswa wasendle nhlobo. Bangalalela, kepha imizwa yabo yokuzivikela emangalisayo kufanele ihlonishwe. Phakathi kwemisebenzi yokwalusa, umalusi oyedwa waseCaucasus angakwazi ngezimpisi ezimbili ezihlasela umhlambi.
Ngaphandle kwesisindo nemisipha yakhe, ziyashesha ngokumangazayo futhi zishesha futhi uboya bazo abuzivikeli nje kuphela esimweni sezulu kodwa nasekulungeni, ngoba ukuba wugqinsi kwenza kube nzima ngamazinyo omphikisi ukufinyelela esikhunjeni.
Akunakuphikwa ukuthi inja yaseCaucasus inedumela lokuba nobudlova kepha iningi laleli dumela litholwe ngokuphathwa ngokungazi kwalolu hlobo, ngokuba umvikeli omkhulu womndeni wakhe. Yenza lokho okuphathisiwe futhi ifeze umsebenzi wayo ngempumelelo.
Isici esibalulekile ukuthi badinga isikhala sokusebenzisa amandlaBanomoya ophansi futhi bazimele futhi bayaphapha uma kukhulunywa ngokuhlangana nezinye izinhlanga. Lokhu kusho ukuthi, akuyona inja yasemadolobheni ngoba ezindaweni zedolobha ingahle ithuthukise izici ezinhle zomlingiswa wayo.
Yize lesi silwane siphilile impela futhi asinazo izifo zofuzo uma sithinteka ezifweni ezinkulu zokuzala.
Kubalulekile ukulandela imiyalo kadokotela wezilwane maqondana nokudla okufanele bakulandele nokuvikela izifo ezifana inqulu, indololwane kanye ne-dysplasia yenhliziyo. Lesi sakamuva sithonywe kakhulu yindlela yokudla yezilwane, yingakho ukukhuluphala ngokweqile nokukhuluphala kufanele kugwenywe.
Phakathi kokunakekelwa okuvamile, imigomo akufanele inganakwa futhi kubalulekile ukuyihlikihla ngensimbi efanelekayo kabili ngesonto. Ngenxa yokusebenzisana kwayo nemvelo, ukunakekelwa kokuvikela nokufika ngesikhathi kufanele kuthathwe kunoma yiluphi uhlobo lwama-parasites.
Uyayithanda le nhlobo yenja? Silandele futhi uzothola imininingwane eminingi ngalokhu nezinye izinhlobo.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izinja zizala » ICaucasian Shepherd Dog
Angizukugoqa. Inja yami ithole ingozi encane futhi ithintwe inyonga yakhe. Simnikeze ukwelashwa okuhlukile futhi wathuthuka futhi ngasikhathi sinye wayemubi futhi manje usebenze kahle kakhulu ezinyangeni ezimbalwa selokhu ngamnika i-mascosana cissus.
Lokhu kuyamangalisa, ngisho nodokotela wezilwane umangele.
ULurdes Sarmiento kusho
Sijabule kakhulu, kepha kufanele sikhumbule ukuthi udokotela wezilwane uhlala njalo kunguye onganquma ukuthi uzonikani noma cha isilwane.
Phendula uLurdes Sarmiento
Sijabule kakhulu, kepha kufanele sikhumbule ukuthi kufanele kube udokotela wezilwane ohlale esitshela ukuthi kufanele angasithathi isilwane sethu.
Yini i-Ultra Levura futhi yenzelwa ini?